Wakiilka Gareth Bale oo ka hadlay dalab la sheegay in Tottenham ay ka soo gudbisay xiddiga reer Weles – Gool FM
(Madrid) 16 Luulyo 2019. Wakiilka xiddiga kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa wuxuu ka hadlay wararka saacadihii lasoo dhaafay soo baxay ee ku saabsan in Tottenham ay dalab kasoo gudbisay si ay ula soo saxiixato xiddigeedii hore ee reer Weles.
Hadaba Jonathan Barnett oo ah wakiilka Gareth Bale ayaa wuxuu beeniyay dhamaan wararka xanta ah ee lagu baahiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain ee ku aadan in Tottenham ay dalab kasoo gudbisay Bale si ay ula saxiixato inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Hadaba Jonathan Barnett ayaa wareysi uu ku bixiyay duhurnimadan shabakada “talkSPORT” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Aniga kama hadli karo, wararkan sida qashinki oo kale ah”.
Yeelkadeeda, Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu subaxnimadan Talaadada ah shaaca ka qaaday wararka sheegaya in kooxda Tottenham ay xiiseenayo adeega Gareth Bale, isla markaana ay diyaar la tahay inay ku bixiso saxiixiisa qiimo dhan 60 milyan oo euros.
Jonathan Barnett ayaa ku cel celiyay dhowr jeer oo horey in Gareth Bale uu doonayo inuu sii joogo kooxda Real Madrid isagoo yiri:
“Ciyaaryahanka ma doonayo inuu ka tago Real Madrid islamarkaana wuxuu diyaar u yahay inuu sii joogo xilli ciyaareedka soo socda, Bale wuxuu heystaa qandaraas ilaa iyo 2022”.
Goorma ayuu Matthijs de Ligt caafimaadka u mari doonaa Juventus? Lambarkee ayuuse xiran doonaa?